Kedu ihe bụ Mashup? | Martech Zone
Kedu ihe bụ Mashup?
Tuesday, June 20, 2006 Mọnde, Febụwarị 15, 2016 Douglas Karr
Mmekọrịta na akpaaka bụ ihe abụọ m na-agwa ndị ahịa mgbe niile… ndị ahịa kwesịrị iji oge ha rụpụta ozi ha, rụọ ọrụ na ihe okike ha, ma zube ndị na-azụ ahịa ozi ndị ahịa chọrọ ịnụ. Ha ekwesịghị itinye oge ha niile na-ebugharị data site n’otu ebe gaa na-esote. Ọ bụ nkwenye m na Mashups bụ ndọtị nke njikọta na akpaaka na weebụ.
A mashup, na mmepe weebụ, bụ ibe weebụ, ma ọ bụ ngwa weebụ, nke na-eji ọdịnaya sitere na ihe karịrị otu isi mepụta otu ọrụ ọhụụ gosipụtara n'otu eserese eserese.
Mashups dị na weebụ na-ejikarị 2 ma ọ bụ karịa ngwa mmemme ngwa. Otu ihe atụ nwere ike ịbịanye ọrụ mmekọrịta na Google Map iji ma Twitter API na API Google Maps. Ha abughi nani ihe omume ntụrụndụ na ngwaọrụ ọzọ, enwere ọtụtụ nyiwe nke dị njikere ugbu a - ijikọta ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, CRM, email na isi mmalite data ndị ọzọ iji mepụta sistemụ zuru oke nke na-ejikwa ngwa ngwa na ngwa ọrụ dị mgbagwoju anya.
Na-adịbeghị anya, na okwu gwakọọ na-ezokarị aka n'ihe nkiri vidiyo na nke ọdịyo ebe ụzọ abụọ ma ọ bụ karịa nke vidiyo ma ọ bụ egwu si achịkọta. Nke a bụ ezigbo ihe atụ - AC / DC na Bee Gees:
Tags: APIgoogle maponye njikwa ihe osiseGUIgwakọọTwitterNgwa weebụWeb mmepegịnị bụ mashup
Magazinahịa ruru $ 14.99